သင့်အိမ်အကြိုက်ဆုံးလမ်းပေါ်မှာနှင့်ကြီးကြပ်မှုလိုအပ်နေတစ်ဦးတည်းလမ်းလျှောက်လေ့ရှိသောမခံခဲ့ရပါကကဲ့သို့သောအရာရှိသည်ဖို့လိုအပ် ကြောင်များအတွက် leash ။ ခွေး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, သူစိမ်း - သင်တန်း၏, သငျသညျသူ့ကိုပြန်ကိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုမရှိကြပါဘူးလျှင်, လှသောတိရစ္ဆာန်တွှေဖို့နိုင်ပြီး, ကပြေးသွားလိမ့်မည်အားလုံးသော။
ကြောင်အတွက်လည်ပင်းကြွက်သားတွေအတော်လေးအားနည်းနေဖြစ်တယ်, ဒါသူတို့မဝတ်နိုင်ပါတယ်မည်သည့်ကိစ္စတွင်အတွက်ကော်လာ။ အထူး ကြိုး သငျသညျသူမ၏အကြိုက်ဆုံးများအတွက်အေးဆေးဆက်လက်ကူညီခြင်းနှင့်သူမ၏ကျန်းမာရေးမနှောက်ယှက်ပါလိမ့်မယ်။ သူမသည်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားချိတ်ဆက်ထားတဲ့နှစ်ခုကော်လာ, ပြန်ပြောပြသည်။ သင်သည်သင်၏ကြောင် leash ထားခင်မှာသင်တို့သည်လည်း၎င်း၏ဒီဇိုင်းအတွက်ကောင်းစွာဤအမှုကိုနားလည်နိုင်ရပေမည်။ အကြိုက်ဆုံးကသင်၏လက်၌ယခုကြောင့်သို့သော်ဤအရာအဘို့ချွေး, ကျိုးနပ်သည်။ အခြားအဘယ်သူမျှမနှောင့်အယှက်လိမ့်မယ်သူ့အဘို့တစ်ဦးကကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်။
ကြောင်တစ်ကောင် leash ပေါ်တွင်တင်မှဘယ်လိုနေသလဲ?
သငျသညျကြောင်များအတွက် leash ပေါ်တွင်တင်မီ, သငျသညျအဘယျသို့ဘာနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ သင့်အနေဖြင့်အသစ်ဝယ်ယူ leash များအတွက်တောင်ပေါ်၏ရှေ့တော်၌မဆုံးရှုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကပခုံးဓါးသွားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အကြားဖြစ်သင့်တယ်။
အလွန်ဂရုတစိုက် pitomitsy ခေါင်းကော်လာ Push ။ သင့်ရဲ့ carbine ဘို့တောင်သွေ့ခြောက်၏ထိပ်ပေါ်မှာဖြစ်သင့်သည်။ သင်လည်ချောင်းထဲမှာမြင်ရပါလိမ့်မည်တံတားချိတ်ဆက်ခြင်း။ ချိန်ညှိခံရဖို့ကော်လာအရွယ်အစား။ သငျသညျလည်ပင်းနှင့်လက်စွပ်အကြားသင့်ရဲ့လက်ချောင်းကပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အကြိုက်ဆုံးများအတွက်အများဆုံးအဆင်ပြေအနေအထားအမှုဖြစ်လိမ့်မည်။
နောက်တစ်နေ့ခြေလှမ်းတခြားဘက်မှာတည်ရှိပြီးသောလက်စွပ်အတွက်ကြောင်၏ဒဏ်လက်မှဆွဲသည်။ Jumper ကိုအလွန်ဂရုတစိုက်စွဲစေ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏ရင်ပတ်ပေါ်မှာရှိသင့်ပါတယ်။ pitomitsy ကောင်းသောခံစားခဲ့ရသို့မှသာအဆိုပါကြိုးညှိရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါကြောင်နှင့်ကြိုးများအကြား space ကိုသင့်ရဲ့လက်ချောင်းနှစ်ချောင်းရဲ့ width နဲ့တန်းတူဖြစ်သင့်သည်။
အရမ်းအလျင်အမြန် leash ၏သင်အကြိုက်ဆုံးဝတ်ဆင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ pitomitsy ထားပြီးကြိုးအာရုံစိုက်ဖို့ငြိမ်းတဲ့အခါမှသာ, သင်ကလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ဒါကြောင့်သင်စိတ်ပူစရာမရှိစေရေးအတွက်အသစ်အာရုံဖို့အသုံးပြုရရန်ကြောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
မှန်ကန်စွာနဲ့တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ကြောင် leash ထားရန်, သင်မြန်မြန်လုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်သည်းခံခြင်းကိုသာတပ်မက်လိုချင်သောရလဒ်အောင်မြင်ရန်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ကူညီပေးပါမည်။
တစ်ဦး leash အပေါ်တစ်ဦးကြောင်လမ်းလျှောက်ဖို့ကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကိုသင်နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, တစ်ဦးချင်းစီတိရိစ္ဆာန်ဘို့သင့်ကိုတစ်ဦးချင်းချဉ်းကပ်ပုံကိုရှာဖွေရန်ရှိသည်။ အားလုံးသင်အကြိုက်ဆုံးသူမကိုယ်တိုင်ကအားဖြင့်သွားလာထင်သောကြောင့်အမှုအရာစီစဉ်ဖို့လိုပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, ပုံမှန်လမ်းကြောင်းသင်တစ်ဦး leash အားဖြင့်ထိုအတူကြောင်တွေ့ဆုံရန်နိုင်သည့်မှတဆင့်ကျော်ဝင်သော။
ဗရာဒိုခွေးကလေး - ဝိသေသလက္ခဏာများကိုမွေး
Chihuahua - ထိုဖောက်၏ဖော်ပြချက်
သန္တာဂျာကင်အင်္ကျီဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
စပျစ်သီး၏ Frost ကယဉ်မျိုးပေါင်း
ကြော်စားမှိုနှင့်အတူသုပ် - စာရွက်
သေးသေးလေး Schnauzer ခွေးပေါက်စ
Lumbar sciatica - ရောဂါလက္ခဏာနှင့်ဆေးဝါး